Xero Terminal, Xiriiriyaasha Duulista Shidaalka - Haiyan
Xiriirinta Xirmooyinka Shuban Biyoodka
Xakameynta Naafada Dab-damiyaasha Xirayaasha
Dhismaha xarunta laanta
Nooca isku xirka DIN-tareenka
Cabbirka Tamarta Quful Terminal
Dhisme Terminal culus oo hadda socda
Dhismo garoon badan oo ujeeddo leh
Isku-xidhka is-kor-u qaadista ee Term
Dhismo Terminal oo loogu talagalay sanduuqa mitirka
Dhismaha barta xero-mareenka
Sanduuqa Cadaynta Isgoyska Biyaha
Santuuqa Isugeynta Caddaynta Biyaha ee Xabaasha
Qulqulka Tayada leh
Shiinaha. Haiyan Terminal blocks Co., Ltd oo ah shirkad wax soo saar oo Terminal ah oo laga leeyahay Shiinaha, waxay soo martay jawiga warshadeed ee cakiran. Waa soo-saare xirfad-yaqaan ah oo mideysa cilmi-baarista iyo horumarinta, soosaarka iyo iibinta dhismooyinka waaweyn ee hadda jira, oo la aasaasay 1991. Sumcadda dhismaha ee Haiyan waxay caan ku tahay guriga iyo dibedda.
Waxaan Soo Bandhigno
Ku takhasustay soosaarka burooyin kala duwan
Qulqulatada Terminalka Sare ee Hada taagan
Guji muunad bilaash ah
Sida Aan U Shaqeyno
Bixiyaha xalinta silsiladda sahayda birta adduunka
Aqoon isweydaarsi iyo Mashiin
Muunad muunad ah
Tayada wanaagsan, qiimaha warshad, gaarsiinta dhaqsaha ah.
Faa'iidada wax soo saarka
Dhammaan nashqadeynta iyadoo loo eegayo shuruudaha aqoon isweydaarsiga heerka qaran, habka waxsoosaarka iyadoo la raacayo heerka caalamiga ah, maalgashada lacag fara badan si loogu iibsado mashiinka wax soo saarka saxda ah iyo qalabka tijaabada, yareyno khaladaadka howl wadeenka;
Maareynta adeegga macaamiisha ee wareega oo dhan, iyada oo loo maro dariiqyo kala duwan oo lala xiriiro macaamiisha, marka loo eego baahida macaamiisha ee macaamiisha si ay u doortaan badeecadaha ku habboon iyo xallinta, xirfad-yaqaanka si loo xalliyo dhibaatooyinka farsamada.
Alaabada ugu sareysa
Sheegida wax soo saarka ee shirkadda ayaa buuxa, waxaa jira in ka badan 200 oo taxane ah, oo ay ku jiraan 1800 nooc oo alaabooyin cayiman oo kala duwan, wax soo saar cabbir, hubinta qiimaha ugu hooseeya, si loo soo saaro alaab tayo sare leh. taxanayaal tijaabooyin burburin ah oo shaybaarka ku jiray.
Kala tasho khadka internetka
24-saac adeegga khadka tooska ah
0086-13968745082 (Mr. Eric, Agaasimaha Maareynta)
Macaamiishayada Qiimaha Badan
Beerta Warshadaha ee Wengyang, Magaalada Yueqing, Gobolka Zhejiang
Isniinta-Sabtida	09: 00-18: 00
Waxaan ku dadaalnaa inaan macaamiisha siino alaab tayo leh. Macluumaad Codsi, Muunad & Quote, Nala soo xiriir!
Khariidad Luqadeed oo Kale
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh. Taageero farsamo: globalso